Ity herinandro ity tao amin’ny bilaogy Palestiniana : Oran-dohataona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2019 10:25 GMT
Hetsi-panoherana am-pilaminana hafa indray no nivadika ho korontana ny herinandron'ny 11 Aogositra, satria nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny bala fingotra sy baomba mankarenina ireo miaramila Israeliana rehefa iny ry zareo nihazo ny Separation Wall (rindrina manasaraka) iny. Nitatitra ny International Solitary Movement hoe efatra ambiny folo ny olona naratra, anatin'izany ny Israeliana iray mpikatroka mafana fo . Ny Bethlehem Bloggers no nahazo fampitam-baovao voalohany avy amin'ilay mafana fo Jenny Digi. Asehon’ ny lahatsary tamin'ilay hetsika novokarin'ireo Israeliàna mpikatroka ao amin'ny ISM, ny Komandin'ilay andiany mihiakiaka hoe: “Libanoana ity! Tsy hanome fahafahana manao hetsipanoherana mihitsy aho mandritra ny fotana isian'ny ady”, raha teo am-pibaikoana ny andiany hitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana efa nisintaka.
Nandritra izany fotoana izany, nanohy ny fanaovana fahirano an'i Gaza sy ny alahelo ny tany niaviana, niantso ny tany an-trano i Laila El-Haddad, raha toa ilay Dr. Mona El-Farra kosa nanoratra taratasy iray manazava ny toe-draharaha avy amin'ny fomba fijery amin'ny maha reny, dokotera ary olom-pirenena ao Gaza azy. Manana vaovao vitsivitsy mahaliana momba ilay hetsika Oran-Dohataonan'i Israely i Iman, natao mba hanavotana miaramila israeliàna iray, ka nahitàna fiakaran'ny isan'ny olona namoy ny ainy ho 193 ary 790 no naratra tao Gaza. Olona 58 tamin'ireo maty ireo no latsaky ny 18 taona ka 25 no vehivavy. Tanatin'izany, nahazo ny mari-pakasitrahana be mpividy indrindra tamin'ny Capalbio International Film Festival ilay sarimihetsika Palestiniana “Dreams in Grey Spot”. Vola 60 dolara monja no namokaran'ireo andiana tanora mpilalao sarimihetsika latsaky ny 20 taona azy, resahan'ilay sarimihetsika ny nofinofinà tovolahy iray avy aminà tobinà mpitsoa-ponenana iray ary te-hanao poezia sy ho te-ho lasa artista .
Ao anatin'ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Windows So Clean” (Varavarankely Madio Be) ity dia mampiasa ny haikantony i Amal Kawash , izay sady mpitoraka blaogy no mpanakanto, mba hampahatsiahy antsika ny fomba fijery matetika ananan'ny olona avy ao anatiny …
Manana horonantsary mahavariana an'i CBC i Fadi ao amin'ny KabobFest mikasika ny sivana ataon'ny fampahalalam-baovao Israeliana rehefa ilay tafika mijery ny maha olombelona indrindra manerantany no resaka. Manana tantara mahaliana ho tantaraina ihany koa i Katie momba ilay mpiasa ao amin'ny fiarovana ny zon'olombelona izay niezaka niaro lehilahy Palestiniana efatra nosamborin'ireo miaramila Israeliana tsy ahoan-tsy ahoana teny an-dalambe.
Mi'kmaq avy amin'ny Window of Palestine no nitatitra fa ny antoko politika Fateh dia niantso an'i Isiraely mba hanajanona ny fisamborana ireo vehivavy sy tovovavy mba hanerena ireo havany izay gadra politika :
Amin'izao fahasarotan'ny fahazoana herinaratra, rano sy solika izao, dia manana lahatsary iray mahaliana i Haitham Sabbah momba ilay mpanolotra vaovao, Jon Snow, izay nifanandrina tamin'i Zvi Ravner, Ambasadaoron'i Israely ao Londona, mikasika olan'ny famaizana faobe ataon'i Israely amin'ny vahoaka ao Gaza. Nandritra izany, ny toe-draharaha nafampana tao Gaza no niteraka aingam-panahy ho an'i Hayam ao amin'ny Poetry4Palestine nahavitany poezia namirapiratra. Raha i Ola avy amin'i Cinnamon Zone kosa manana fitsipika vitsivitsy tokony ho tadidiana mba hahatakarana tsara ny fifandonana misy ao Afovoany Atsinana taterin ey anatin'ny fampahalalam-baovao.
Eo anivon'izany korontana niseho vao tsy ela izany no nitantaran'ilay bilaogera vavy Al-Falasteenyia ny diany nandritra ny efatra andro tany Palestina, anatin'izany ny fitsidihana ny trano fonenany taloha sy ny tahirintsarin'izy ireo taloha nahafinaritra. Nandritra izany i Umkhalil no misarika ny sain'ireo mpitoraka bilaogy ho amin'ny fampiharana ny zo ahafahana miverina an-tanindrazana
Naseem Tarawnah avy ao amin'ny The Black Iris no niresaka mikasika ny tatitra mahatsiravina farany nataon'ireo fampahalalam-baovao ao Afovoany Atsinanana, indrindra ny fiakaran'ny fanohanana mibaribary ataon'ireo American Evangelical Christian (Amerikana Evanjelika Kristiana) ireo famonoana ataon'i Israely, izay vao tsy ela no nasehon'ny an'i Pat Roberston sy John Hagee. Amin'ny maha Kristianina Palestiniana azy, manan-javatra ho lazaina vitsivitsy mikasika izany fanohanana izany ilay mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy Daoud Kuttab :
Nahita fomba vaovao hampiasana ny blaogy ao Palestinina i Osaid Rasheed : PELTA (Palestinian English Language Teachers Association) na Fikambanan'ny Palestiniana Mpampianatra teny Anglisy . Na dia mbola tena ao anatin'ny fanombohana tsotsotra aza aloha izany hatreto, mikasa ny hamorona sehatra iraisana hampivondronana ireo Mpampianatra Teny Anglisy rehetra ao Palestina izy io. Manontany tena i Osaid Wonders hoe :“Moa ve io blaogy io afaka hampivondrona ireo Palestiniana Mpampianatra teny Anglisy anatin'ny fotoana izay anasarotan'ireo toeram-pisavàna ka tsy ahafahan'izy ireo na dia ny hamonjy ny toeram-pampianarany aza ??! ”